भीम रावलले राजीनामा फिर्ता लिन लागेका हुन् ? – Halkhabar kura
४ श्रावण २०७८, सोमबार १७:११
भीम रावलले राजीनामा फिर्ता लिन लागेका हुन् ?
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आइतबार प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाट राजीनामा दिए। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको विघटित कार्यदलका सदस्यले रोक्न खोज्दा खोज्दै उनले राजीनामा पत्र पढेर पत्रकारहरुलाई सुनाए।
तर उनले राजीनामा दिए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनको राजीनामा स्वीकृत भएकोबारे सोमबार दिउँसोसम्म औपचारिक सूचना प्रकाशित गरेका छैनन्। संविधानको धारा ८९ को (क) अनुसार सांसदले राजीनामा दिएपछि उक्त स्थान रिक्त भएको मानिन्छ। सभामुखले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छैन।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सांसदले राजीनामा दिएपछि सभामुखले स्थान रिक्त भएको सूचना निकाल्नु पर्ने व्यवस्था छ। नेकपा एमालेका सांसद् भीम रावलले संसद पदबाट आइतबार राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए।
माधव नेपाल पक्षबाट पार्टी विवाद समाधान गर्न गठन गरिएको कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका रावल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वा’सको मत दिने निर्णयबाट असन्तुष्ट रहेको कारण संसद पदबाट राजीनामा दिएको बताइएको थियो।
सोमबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि भीम रावललाई राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। ओलीले रावलले हतार गरेर राजीनामा दिएको बताउँदै फिर्ता लिन भनेका थिए। सभामुखबाट राजीनामा स्वीकृत भएको सूचना नआउनुले रावलले राजीनामा फिर्ता गर्न लागेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
Previous प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतीय समकक्षी मोदीको ‘सरप्राइज’ फोन, के भयो कुराकानी ?
Next एक होला त जसपा ? फुटेमा आधिकारिकता कसले पाउँछ ?